Maka: umxholo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 30, 2020 Lwesine, Okthobha 1, 2020 Douglas Karr
Kudala ndenza lula le ndawo ukuphucula amaxesha esantya kunye nokuzama ukwenza imali endaweni engcono ngaphandle kokucaphukisa abafundi bam. Kukho iindlela ezininzi endiye ndenza imali ngazo isiza… apha zivela kwezona zininzi ziye kwezona zinengeniso: Inkxaso ngqo evela kwiinkampani zamaqabane. Sisebenza kwizicwangciso zokudibanisa ezibandakanya yonke into ukusuka kwiwebhu ukuya kwizabelo zemidiya yoluntu ukukhuthaza iminyhadala yabo, iimveliso, kunye / okanye iinkonzo. Intengiso yokudibana evela kuluhlu lwamaqonga amanyeneyo. Ndiyabetha kwaye
NgoLwesine, Septemba 17, 2020 NgoLwesine, Septemba 17, 2020 Douglas Karr
Enye yezona zinto zibalaseleyo ngeWordPress kukuguquguquka kokwakha iikhowudi ezimfutshane. Iikhowudi ezimfutshane ngokusisiseko zifaka imitya onokuyifaka kumxholo wakho onika umxholo onamandla. Ndincedisa umthengi kule veki apho bathatha enye yeemveliso zabo kwaye bayikhuphela kwindawo entsha. Isiza singamakhulu amaphepha kwaye bekusisenzo esikhulu. Njengoko besisebenza kuluhlu olululo lwemicimbi, enye leyo
NgoLwesibini, Aprili 17, 2018 Lwesine, Okthobha 29, 2020 Douglas Karr
Kule minyaka ilishumi, bendisenza ngokwam iipapasho zesiko kunye nokupapashwa, ndilungisa kwaye ndiyila imixholo yesiko, kwaye ndisebenzisa iWindowsPress kubaxhasi. Ibe coaster roller kwaye ndinezimvo eziqinisekileyo kakhulu malunga nokuphunyezwa endikwenzileyo kwiinkampani ezinkulu nezincinci. Ndikhe ndagxeka abakhi-iiplagi kunye nemixholo eyenza uhlengahlengiso olungathintelwanga kwiindawo. Bakhohlisile, bahlala bethambisa kakhulu ubungakanani bephepha lewebhu ngelixa ucothayo
Unyaka nje kuphela ndigqibile ukucoca indawo yethu yeWordPress. Ngelixa bendiluthanda ubeko, bendineetoni yeeplagi kunye nokwenza ngokwezifiso ukwenza ukuba isebenze ngendlela endifuna ngayo, nayo. NgeWordPress, enokuthi iqale ukupela inhlekelele kwindlela yokusebenza kwaye bendibona ukuqhekeka kwisiseko. Ke, ndaya kuzingela uyilo olunokubandakanya zombini imiboniso emikhulu kakhulu
Ngale ntsasa bendinomnxeba omkhulu kunye nomthengi onokubakho malunga neendlela zabo zokuthengisa ezingenayo. Bakhankanye ukuba babedibana nenkampani yokuphuhlisa iwebhusayithi yabo. Ndiqaphele ngaphambi komnxeba ukuba sele bekho kwiWordPress kwaye ndabuza ukuba baya kuqhubeka nokuyisebenzisa. Akazange atsho kwaye wathi oko kwakubi ... wayengenakwenza nantoni na ngendawo yakhe ayifunayo. Namhlanje uthetha naye